Isi agwaetiti anọ nke Japan | Njem zuru oke
Gịnị bụ isi agwaetiti nke Japan?
Agwaetiti ndị Japan nwere ọtụtụ puku agwaetiti, mana Japan anyị na-ahụkarị na maapụ ụwa ama ama - mba ahụ yiri arc nke Oke Osimiri Pasifik gbara gburugburu n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke ụsọ mmiri Asia - mejupụtara agwaetiti anọ: Hokkaido, Honshu, Kyushu y Shikoku .
Honshu bụ nke kachasị ukwuu, ihe dịka Steeti Minnesota, soro ya Hokkaido, Kyushu y Shikoku. Agwaetiti ọ bụla na-enye ihe dịtụ iche maka ndị njem nleta, mana ha anọ jikọrọ aka na teknụzụ na ile ọbịa nke Japan, nke mere ka ọbịbịa gị dị mkpa iji nwee ọhụụ ụwa iji ghọta ọdịbendị ndị Japan.
Mgbe ị na-elele eserese Japan, ị ga-ahụ nkewa n'etiti oke ala ya anọ. Honshu bụ agwaetiti etiti, ya na Tokyo n'etiti etiti agwaetiti ahụ. Isi agwaetiti ọ bụkwa ebe obibi Osaka, Kobe, Kyoto na Nagoya, na imirikiti ndị bi na Japan bi ebe a. Ọtụtụ n'ime ụgbọ elu mba ụwa ha rutere Japan site na Tokyo ma ọ bụ Osaka, ya mere Honshu bụ agwaetiti kasị gaa, obere na ndabara.
Obodo ukwu ya na-ewe onye njem oge ụfọdụ iji mara ya, ma na-akwụ ụgwọ dị ukwuu. Mee ụzọ nke Honshu n'ime Osaka eme ka uche ebe ọ bụ na Kobe, Kyoto na ọmarịcha Nara ha nọ naanị otu awa site ụgbọ oloko, ụfọdụ na-agba ọsọ ọsọ, ụfọdụ na-aga njem.
Obodo ukwu Honshu jikọtara ụgbọ okporo ígwè, ọ bụ ezie na ọ na-efe ogologo njem - Hiroshima na Tokyo - nwere ike ịdị ọnụ ala.
Hokkaido bụ isi okwu ndị Japan "j". Na nke abụọ kachasị ukwuu na nke ugwu ugwu. na kasị ukwuu obodo Hokkaido ọ bụ sapporo, ebe biya biya kacha mara amara na nke ọma na Japan nwere otu aha obodo ahụ o si abịa, na ọtụtụ ezumike nwere ebe ọ na-aga Isuo nke Hokkaido, ha malitere n’obodo a.
A maara agwaetiti ahụ maka ọdịdị ala ya, na ụba nke ogige mba na ememme ndị na-eme ka elu ụwa ha maa mma. Na oyi ememme nke Hokkaido bụ ihe na-adọrọ mmasị ndị njem nleta na-eme ka ndị ọbịa si gburugburu ụwa na gburugburu Japan gbara obodo a kwa afọ, na ugwu nke Hokkaido ịdọrọ ndị na-agba ịnyịnya na ndị na-agba ịnyịnya ígwè na oké blizzard ha.
Kyushu ọ bụ agwaetiti nke atọ kachanụ na Japan na ndịda nke isi anọ. N'agbanyeghị na obere kewara ya ogbu nke Honshu, Kyushu Ejikọtara ya nke ọma site na ụgbọ oloko na bọs si Honshu. Na kasị ukwuu obodo Kyushu bụ Fukuoka a ma ama, obodo nke anọ kachasị na Japan, obodo ukwu mepere emepe na oke oke ugwu Kyushu.
Ọ bụ ezie na Fukuoka bụ etiti etiti agwaetiti ahụ, ọ bụghị n'ụzọ kachasị mma obodo. Nagasaki pere mpema ọmarịcha, na ochie nkume n'okporo ámá, ụgbọala, ụlọ ahịa na ngosi ihe mgbe ochie, na mara maka ụwa nke manga.
Kumamoto, awa abụọ na ndịda Fukuoka, Ọ bụ obodo ewusiri ike nke oge ochie, nke nwere otu ụlọ ochie na nke kachasị mma echekwara na Japan na mgbidi nke na-eme ka Japan si na akụkọ ihe mere eme nke abalị nke mba ahụ, nke kachasị mma iji teta akụkụ anyị dị egwu na nke dị omimi ma nwee ọ enteringụ ịbanye na Asia oge ochie.
Ikpeazụ nke agwaetiti ndị a nke Japan, ma ọ dịghị obere mkpa, bụ nke kasị nta n’ime agwaetiti anọ ahụ isi Japan, Shikoku O nwere obere ihe nwanne nwoke ahụ. Ọ naghị ekwu na ya nwere ugwu buru ibu dịka nke dị na mgbago ugwu Honshu ma ọ bụ Hokkaido, ọ nweghịkwa otu ihu igwe dị nso-dị ka ndịda Kyushu.
Ya mere agwaetiti a nke Shikoku dị obi umeala, na-enye ndị njem nleta ụdị ụlọ nke mpaghara ndị njem nleta na Japan. Ya eke odida obodo bụ ihe e ji mara ya, na kama obere ugwu, nke na-erughị mita 1.800, nke na-adọta ndị hụrụ n'èzí n'anya na ọnọdụ dị nwayọ na nke ọma.
Kwa afọ, Shikoku Ọ bụ ebe obibi nke njem uka Buddha, dị ka ndị njem ala nsọ, ihe ka ọtụtụ n’ime ha si Japan n’onwe ya, dị njikere ịnụ ụtọ ihe kasị mma agwaetiti a nwere inye. N'oge gara aga, ndị njem ala nsọ na-agagharị na klọọkụ na-aga elekere na ụfọdụ okụrede ruo mgbe ebighị ebi na oke ohia.
Ugbu a, okporo ụzọ na ekwentị na-eme ka ọ bụrụ ihe na-agaghị ekwe omume mmadụ ịhapụ ma ọ bụrụ na-anapụta ma ọ bụ chọta tupu ihe emee, mana ememme ahụ ka dị gbasiri ike na nghọta Shikoku.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Gịnị bụ isi agwaetiti nke Japan?
Ọ bụrụ n’ịbu n’obi ịrụ ọrụ na Norway